Willems Oo Dhaawac Uga Hadhi Doona Xulka Holland Ee Ka Qayb Gallaya Koobka Aduunka
HomeHoryaalladaWillems Oo Dhaawac Uga Hadhi Doona Xulka Holland Ee Ka Qayb Gallaya Koobka Aduunka
Laacibka difaaca uga ciyaara naadiga PSV iyo xulka qaranka Netherlands ee Jetro Willems ayaa dhaawac jilibka ka soo gaadhay dartii aan ka qayb qaadan doonin ciyaaraha hadhsan ee horyaalka wadanka Holland isla markaana aan raaci doonin xulka qarankiisa ee u safraya wadanka Brazil , si ay uga qayb gallaan ciyaaraha koobka aduunka .
20 jirkan, kubad reebaha ah ayaa dibada looga saaray, kulankii kooxdiisu 2-0 ka kaga adkaatay naadiga Feyenoord maalintii Axadii , dhowr biloodna ciyaaraha ka maqnaan doona kadib markii dhaawac ka soo gaadhay xagasha jilibka.
Willems oo qarankiisa u saftay 11 ciyaarood, oo ay ugu dambeysay kulankii barbar dhaca 2-2 da ah ay ku kala baxeen qaranka Japan bishii November ee sanadkii tagay , ayaa ka hadhaya xulka uu hormuudka u yahay tababare Louis van Gaal ee u socdaalaya wadanka Brazil.
Baadhis la mariyey Isniintii, kooxda dhakhaatiirta ee naadiga PSV ayaa daboolka ka qaaday in dhaawaca ciyaaryahanka soo gaadhay oo culus darteed aanu ka qayb galli doonin ciyaaraha ka hadhay horyaalka, bilowga horyaalka sanadka dambena ay jirto cabsi laga qabo ka qayb gallkiisa.
“Jetro Willems kama qayb galli doono ciyaaraha horyaalka ee u dhiman PSV xili ciyaareedkan,” ayaa lagu sheegay qoraal rasmi ah oo lagu baahiyey website-ka naadiga . “Difaaca baasha dambe ahi wuxuu ka dhaawacmay tuumbada hoose ee jilibka sidaas darteedna wuxuu maqnaan doonaa dhawr bilood.
Xulka Netherlands, oo uu horena uga maqnaa laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Roma ee Kevin Strootman dhaawac jilibka ah ka soo gaadhay awgeed, ayaa ciyaartooda ugu horeysa ee koobka aduunka, fooda dari doona qaranka Spain bisha June 13 keeda, Group ka B- ee ay ku wada jiraan waxa kale oo sii sugaya qaramada Australia iyo Chile.